Tag: mkpado sdk | Martech Zone
Kpido: mkpanaka sdk
Kuki Google na-akụda?
Tọzdee, Disemba 18, 2008 Monday, December 22, 2008 Douglas Karr
Enwere m echiche a na ọ nweghị ihe ọ bụla nwere ike ịcha. Businesseszụ ahịa na-aga nke ọma na-akarị ikike ha nwere ijikwa uto ahụ, teknụzụ ndị na-arụ ọrụ nke ọma na obere obere anaghị adịkarị arụ ọrụ ahụ n'ọtụtụ buru ibu… ọbụlagodi ndị ọrụ na-akwalitekarị ike ha. Google ahụwo uto a na-enwetụbeghị ụdị ya n'afọ iri gara aga. Ruo oge ụfọdụ, anyị jidere ha na ihe ngosi ma jiri ha mee ihe dị ka nyocha nke ihe ịga nke ọma. Nyaahụ, anyị wedara ụlọ mmanya ahụ